Apple Patents iyo HomePod Kudzora Sisitimu ine Yakabatanidzwa Kamera | IPhone nhau
Apple patents iyo HomePod inodzora system ine yakasanganiswa kamera
Iyo HomePod ndiye mutauri akangwara kubva kuBig Apple iyo yakaona mwenje wezuva munaJune 2017. Makore anopfuura matatu gare gare, Apple yakatizivisa kune mukoma Pamba Pod Mini. Uyu mutauri ane simba anochengetedza zvese zvakanakira iyo yekutangaPodPod mune diki tsoka. Kunyange zvakadaro, hunyanzvi padanho rehardware inofanirwa kufambira mberi kana Apple ichida kusimudzira rutsigiro rwemushandisi rweichi chigadzirwa. Iyo yazvino patent neApple inoratidza izvo zvavakadaidza 'Kudzora nekutarisa', kamera-yakagadziriswa control system iyo inogona kuverengerwa muchizvarwa chinotevera cheApple smart speaker.
Kudzora HomePod nekutarisa kwako kunogona kukurumidza kuitika
Iyi patent inoreva kudzora kwemidziyo yemagetsi. Mune mimwe mienzaniso, chigadzirwa chemagetsi chinoshandisa ruzivo rwekutarisa kuti ishandise mubatsiri wedhijitari. […] Zvemagetsi zvinoshandisa ruzivo kubva kumeso kuona chinhu chekunze chekuita. […] Chishandiso chemagetsi chinopa chiratidzo chinosiyanisa maspika akasiyana.
Iyi ndiyo rondedzero inoshandiswa neApple kutsanangura iyo patent nyowani 'Kudzora kwechigadzirwa uchishandisa ruzivo rwekutarisa ' iyo yakanyoreswa muna Zvita 8 muUnited States Patent uye Trademark Hofisi. Iyi patent nyowani inoratidza pane iro ramangwana reApple's HomePod inogona kunge iri. Kubatanidzwa kwe kamera pane smart speaker zvaizobvumidza iyo sisitimu yekushandisa kuti isanganise misiyano mitsva yekuvandudza kubata kwechigadzirwa pamwechete naSiri.
Mifungo mitatu yakajeka yeiyi tekinoroji yaizosanganisirwa inoratidzirwa mukati mese tsananguro yakawandisa yepatent. Chekutanga pane zvese, zvaizotendera simba ona kuti ndiani ari kutaura uye bvumira kuwana ruzivo kana kwete. Ndokunge, Chiso ID chakakomberedzwa nemutauri akangwara uyo anokupa iwe kupinda kwachiri kana kwete. Chechipiri, kuzivikanwa kwezvigadzirwa zvekudyidzana nazvo: otomatiki kuona zvigadzirwa zvinoenderana neKeKKit, semuenzaniso, uchishandisa tekinoroji yeARKit.
Uye pakupedzisira, kuonekwa kwemunhu arikutaura kana paine vanhu vanoverengeka uye zvikumbiro zvinoitwa senge: 'Hei Siri batidza mwenje uyu'. Mune ino kesi, mushandisi angave achinongedzera kana kutarisa chigadzirwa chiri mubvunzo chingave chakabatana nehurongwa kuburikidza neKeKKit. Mune ino kesi, kuwanikwa kwemushandisi, kuonekwa kwerambi uye mashandiro echiito kwaizosanganiswa pakupedzisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Apple patents iyo HomePod inodzora system ine yakasanganiswa kamera
Facebook Zvirongwa ZveMushandirapamwe Kurwisa Apple Yekuti "Kuenda Kunopesana Nekusatsigira Nyika"
Iyo iPhone 12 Pro kamera pamberi peiyo ramangwana Galaxy S21